ပလက်ဝမြို့နယ်တွင် ရခိုင်အမျိုးသမီး တဦးကို စစ်တပ်က မုဒိမ်းကျင့် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ပလက်ဝမြို့နယ်တွင် ရခိုင်အမျိုးသမီး တဦးကို စစ်တပ်က မုဒိမ်းကျင့်
Posted by Bayote on May 12, 2010 in Myanma News, News | 14 comments
န၀တ စစ်အစိုးရ အာဏာ သိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း ၁၉၉၀ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အဆိုပါ ပလက်ဝမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရခိုင်ကျေးရွာများတွင် ဗမာ စစ်သားများက မီးပုံပွဲများ ပြုလုပ်၍ အရက်များ သောက်ကာ လင်ရှိ – လင်မရှိ အမျိုးသမီးများကို အတင်း ခေါ်ယူပြီး ညစဉ် ညတိုင်း မီးပုံပွဲ လုပ်ကာ စစ်သားများနှင့် ကခိုင်း သဖြင့် အနည်းဆုံး ရခိုင်ကျေးရွာ (၅) ရွာမှာ ပြိုပျက်သွားပြီး အိန္ဒိယ ဘက်သို့ ထွက်ပြေးခဲ့ကြသည်။
Source : http://www.narinjara.com/burmese.asp
ဟုတ်ပါတယ်။ Update မလုပ်မိလိုက်လို့ပါ။ အခု Update ပြန်လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီသတင်းသာ အမှန်ဆိုရင်တော့ စစ်တပ်အနေနဲ့ သိက္ခာဆယ်တဲ့အနေနဲ့ ထိထိရောက်ရောက်အပြစ်ပေးသင့်ပါတယ်
ဒီသတင်းသာ အမှန်ဆိုရင်တော့ စစ်တပ်က သိက္ခာဆယ်တဲ့အနေနဲ့ ထိထိရောက်ရောက်အပြစ်ပေးသင့်ပါတယ်
ဗိုလ်ကြီးတို့လာမှပဲ ကျမတို့ ရွာလေးလဲ….
ပြည်သူ့တပ်မတော် သားများ ပြည်သူ့တပ်မတော် သားများ
ဆွမ်းဆန်ထဲကြွက်ချေးရောတဲ့ခေတ်လား…ကြွက်ချေးထဲ ဆွမ်းဆန်ရောက်နေတဲ့ခေတ်လား မသိတော့ပါ…ယခုလိုအဖြစ်မျိုးကတော့ မဖြစ်သင့် မဖြစ်ထိုက်တာအမှန်ပါ…
ဗမာစစ်တပ်ဆိုတာ ဖက်ဆစ်ဂျပန်တွေက လေ့ကျင့်ပေးလိုက်တာမို့မိန်းမတွေ့ရင် မုဒိမ်းကျင့်တာ ဆန်းသလား။
ဆန်းတာက အဲဒီစစ်သားတွေရှိတဲ့နေရာ သွားတဲ့ မိန်းမ၊ မေတာသုတ်ရွတ်တဲ့ သံဃာတွေပဲ
ကျွန်တော်တို ဗမာ တွေက အလိုမရှိနိုင်ပါဘူး..
ဒီလိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ တော့တော့လေးကို မယုံနိုင်စရာပဲ။။
တို့ဗမာ သွေးက မျိုးချစ်သူရဲကောင်းသွေးပါ။။
မြန်မာပြည်ကိုချစ်လို ဘယ်နိုင်ငံ မှာ အလုပ်သွားမလုပ်ဘူး။
သူများနိုင်ငံ အလုပ်သွားလုပ်ရင် သူများနိ်ုင်ငံ ပဲကြီးပွားကြမှာ။
ကိုယ်နိုင်ငံ မှာကိုယ်အလုပ်လုပ်မှာ ကိုယ်နိ်ုင်ငံ တိုးတက်မှာ လေ။
ဗမာ လူမျိူးမှန်ရင် ပြတ်သနာ တစ်ခုကို ကိုကိုယ်တိုင်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရဲရမယ်..။
ဘယ်သူမှာအားမကိုးနဲ..။ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးရှိခဲ့ရင် ဒီလိုလုမျိုးကို မြန်မာပြည်မြေပေါ်မှာ မထားသင့်ဘူး။။။
ဗမာလူမျိုး ဗမာလူမျိုးလို့ ပြောမဲ့အစား မြန်မာလူမျိုးလို့ပြောတာပိုမကောင်းဘူးလားဟင်။
တကယ့်သတင်းအမှန်ဆိုရင်…. အဲဒီလိုလုပ်ဖို့တော့ မကောင်းပါဘူးဗျာ…. လူသားချင်းစာနာမှုလေးတော့ ထားကောင်းပါရဲ့….လူသားချင်းမစာနာတောင် နှမချင်းတော့ စာနာကောင်းပါတယ်…… လူသားတစ်ဦးအနေနဲ့ ကိုယ်ချင်းစာနာမှု လေးတော့ ရှိသင့်ပါတယ်…..
ဆိုးရွားလှတဲ့ လုပ်ရပ် နအဖနဲ့ပတ်သက်လို့ကြားရတဲ့ သတင်းက ဘာတစ်ခုမှရစရာမရှိဘူး ။